Rosia · Jona, 2014 · Global Voices teny Malagasy
Rosia · Jona, 2014
Tantara mikasika ny Rosia tamin'ny Jona, 2014
Fanatanjahantena 30 Jona 2014
Hehy 29 Jona 2014
Mety ho Alfred Kinsey-n'i Rosia Ve i Snowden?
Fitantanam-pitondrana 28 Jona 2014
Edward Snowden no Alfred Kinsey amin'ny vanim-potoanan'ny aterineto. Izany no nambaran'ilay mpanao gazety Rosiana Dmitri Goubine tamin'ny lahatsoratra bilaoginy tamin'ny herinandro lasa, mandinika izay mety ho fiantrakan'ny fanarahamaso faobe ataon'ny governemanta eo amin'ny fenitra ara-tsosialy hoavy.
Mivazivazy Amin'ny Fivoaran'ny Ekipam-pirenena Eo Amin'ny Fiadiana Ny Amboara Eran-Tany Ny Rosiana
Fanatanjahantena 27 Jona 2014
Miresaka ny trangan'ny ekipa Rosiana avokoa ny rehetra, nefa ny tena mampivarahontsana dia ny fivoaran'ny ekipa izay ahitana ny mpilalaon'ny Real Madrid sy Barcelona.
Mediam-bahoaka 24 Jona 2014
Ny ankamaroan'ny sakafo Rosiana dia ampiarahana amin'ny pelmeni (henabaolina fonosina lafarinina), krepy, ary vodka. Fa hatramin'ny taranaka nifandimby, na izany aza, dia tia sy mahandro ireo karazana foto-tsakafo marobe mampiavaka azy ny Rosiana.
Eoropa : Mampahery Ny Rosiana Ny Fandresen'ny Hery Ankavanana
Eoropa Andrefana 23 Jona 2014
Raha toa ka mampitaintaina ny sasany ao amin'ny firaisambe Eoropeana io fiovana io, betsaka ny Rosiana no nandray izany samboaravoara ao amin'ny fisarahan'ny Eoropeana izany ho toy ny fanamarinana ny fihetsika manohitra ny Firaisambe Eoropeana ataon'i Maosko.
Nahatsiaro Saina i Schumacher, Mahita Hanihany Atao Ny Twitter Rosiana
Fahasalamàna 23 Jona 2014
Nanomboka ny 29 Desambra 2013 hatramin'ny 16 Jiona 2014, tao anatin'ny tsy fahatsiarovan-tena (coma) ilay mpamily rallye efa misotro-ronono Michael Schumacher. Rehefa nahatsiaro izy ary nandao ny hopitaly, nanararaotra ity tranga ity hamazivaziana ny fanatanjahan-tena sy ny politika ireo mpisera Twitter Rosiana.
Nilaza i Rosia Fa Nanery Ny Twitter Hamafa Kaonty Hosoka Ny Roscomnadzor
Fahalalahàna miteny 23 Jona 2014
Nilaza ny i Roscomnadzor fa nanery ny Twitter hamafa kaonty hosoka milaza an'i i Vladimir Konstantinov ho mpanao politika Krimeana.
Etazonia 16 Jona 2014